गर्भपतन 'Mirolyut' को लागि मतलब: दबाइ निर्देशन
हाल, हाम्रो देश को महिला झन् एक अनावश्यक गर्भावस्था को कृत्रिम समापन resorting छन्। औषधि पसल मा भ्रूण को चिकित्सा expulsion लागि लागूऔषधको एक ठूलो संख्या पूरा गर्न सक्छन् (मखमल गर्भपतन)। एक यस्तो उपकरण को "Mirolyut" छ। प्रयोगको लागि निर्देशन हाम्रो लेखमा छलफल गरिनेछ। प्रकाशन तथापि, मात्र एक जानकारी स्रोत जस्तै लेखक द्वारा लिखित। लेख यसको स्वागत को लागि एक दिशानिर्देश रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। दबाइ contraindications र साइड इफेक्ट रोगी लागि नकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ कि एक नम्बर छ। यसलाई आफ्नो डाक्टर को सख्त पर्यवेक्षण अन्तर्गत उपचार पूरा गर्न आवश्यक छ।
Mirolyut के हो?
एक कृत्रिम दबाइ प्रारम्भिक चरणमा एक अनावश्यक गर्भावस्था समाप्त गर्न - प्रयोगको लागि निर्देशन "Mirolyut" भनेर रिपोर्ट। दबाइ को आचरण सेवन यसको अभिप्रेत उद्देश्य लागि र उपस्थित चिकित्सक को पर्यवेक्षण अन्तर्गत आवश्यक छ।
उत्पादन spigot दाना को रूप मा हो। ट्याब्लेटको "Mirolyut" सेतो व्यक्त गरेका छन्। दुर्लभ अवस्थामा, सतह मा खैरो वा yellowish रङ्ग देखा पर्न सक्छन्। यस ट्याब्लेटको छ beveled र जोखिम छन्। चिकित्सा प्याकेज - गत्ता को पैक। दबाइ कक्ष आकृति वा बहुलक डिब्बे मा उपलब्ध छ, राशि पैकिंग (4-30 एकाइहरु) मा निर्भर गर्दछ। प्रत्येक प्याक Mirolyuta संलग्न प्रयोगको लागि निर्देशन।
तयारीको "Mirolyut" mizopristol समावेश र excipients microcrystalline सेलूलोज छन् सिलिकन डाइअक्साइड, म्याग्नेसियम stearate र सोडियम carboxymethyl स्टार्च।
सही जानकारी सल्लाह को लागि आफ्नो डाक्टर सम्पर्क गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
Mirolyut प्रयोग एक विधि
प्रयोगको लागि निर्देशन तीन पाटी (600 मिलीग्राम) "mifepristone" को खपत पछि 36-48 घण्टा पछि दबाइ लिइरहेको सुझाव। दुई दाना (400 मिलीग्राम) दबाइ को तोकिएको छ।
उपचार कहाँ त्यहाँ एक चिकित्सक र अन्य चिकित्सा कर्मियों को सख्त पर्यवेक्षण अन्तर्गत विशेष उपकरण एक अस्पतालमा बाहिर गर्नुपर्छ।
भर्ना "Mirolyut" लागूपदार्थको लागि सङ्केत गर्छ
प्रयोगको लागि निर्देशन दबाइ प्रारम्भिक चरणमा uterine गुहा मा चिकित्सा गर्भावस्था को निपटान लागि लिएको हुनुपर्छ (42 दिन अघि) भनेर देखाउँछ। यो mifepristone यो दबाइ संयोजन गर्न आवश्यक छ। सर्तहरू एक योग्य टेक्नीसियन प्राप्त गर्न आवश्यक स्पष्ट।
Abortifacient "Mirolyut" र रक्सी सँगै लिएर सिफारिस छैन। तर, contraindications रक्सी नशा रूपमा निर्माता द्वारा निर्दिष्ट गरिएको छैन।
Contraindications "Mirolyut" लागूपदार्थको
उपकरण contraindications एक नम्बर छ:
- यदि विद्यमान निर्भरता वा contraindications (ब्रोन्कियल अस्थमा, मधुमेह मेलिटास वा adrenal) prostaglandins गर्न;
- मृगौला र कलेजो को रोगहरु;
- यो हृदय प्रणाली को रोगहरु;
- ट्यूमर (हर्मोन);
- एक intrauterine उपकरण प्रयोग (पूर्व हटाउने आवश्यकता छ);
-with intrauterine गर्भावस्था को शङ्काको;
- यो तयारी कुनै पनि घटक गर्न उच्च संवेदनशीलता।
तपाईंको अवस्थित contraindications स्पष्ट गर्न, लागूपदार्थ "Mirolyut" लिएर गम्भीर परिणाम को संभावना बाहिर शासन गर्न आफ्नो डाक्टर सम्पर्क गर्नुहोस्।
दबाइ को साइड इफेक्ट
, को भुँडी दुखाइ cramping उल्टी वा वाकवाकी, टाउको दुखाइ, चक्कर आना, को घटना flatulence, पखाला, निस्तब्धता, छाला दाना। स्वागत "Mirolyut" सिफारिस खुराक मा दबाइ को हृदय प्रणाली, कलेजो वा अन्तस्करणले मा साइड इफेक्ट कारण छैन।
तपाईं माथि लक्षण कुनै पनि देख्न गर्दा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
वजन "Orsoten" को लागि औषधि: प्रयोगको लागि निर्देशन
फिक्री विरुद्ध दबाइ "Stresam"। सक्रिय मान्छे को समीक्षा
Analogs "Combilipen": दक्षता, कार्य र मूल्य
बस दबाइ "Oktolipen" बारे: रोगी छोटकरीमा लागि प्रयोग को लागि निर्देश
'Flemoksin soljutab'। दबाइ कस्तो?
मुद्रा रूपान्तरणको - यो के हो?
मोबाइल फोन Caterpillar CAT B25: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
कसरी बाल हेरचाह गर्न
खेल एकाधिकार को नियम र आधारभूत रहस्य
डालियान: लघु चीन
हवाईअड्डाबाट बुडापेस्टको केन्द्र कसरी प्राप्त गर्ने: जानकारी
कान्सास फूल - लोकप्रिय हस्तशिल्प
मशरूम संग उचित पिज्जा
किन चुलो "Lanos" खराब heats?